Miavosa ary manamaimbo ny tanàna ny fako - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Olana mianjady amin’ny mponina eto an-tampon-tanànan’Antsirabe rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao ny fofona tena maimbo ateraky ny fako miavosa etsy sy eroa. Mandoto rivotra. Lavitra ilay filamatra milaza fa tanàna madio Antsirabe. Mahasorena indraindray ny mieritreritra izany. Andraikitry ny ao amin’ny sampan-draharaha ara-tekinika eny amin’ny voaria ny manao ny fandraofana sy fanadiovana. Miezaka tokoa izy ireo manatanteraka ny asany araka ny voalazan’i Ranarisoa Maminirina, tompon’andraikitra misahana ny fanatsarana sy ny fahadiovan’ny eto Antsirabe ambonivohitra. Mahakasika ireo fitaovana ampiasaina kosa dia fantatra fa kamiao valo no ampiasaina. Samy manana ny asany izy ireo ka ny efatra mpitaona, telo mpampakatra fotsiny, iray mpandraoka ary misy ihany koa ny kamiao natao mpitarika. Ampiasaina hanadiovana ny fanariam-pako no tontolo andron’ireto fiara ireto, mba ho hita taratra tokoa ny maha tanànan’ny rano an’Antsirabe, ka maha te-honina ny mpandalo sy ny mpizaha-tany. Ny indro kely anefa, dia mifofotra irery ny kaominina ambonivohitra manatontosa ny asa. Tsy araka ny fividianana ny gazoaly hampandehanana ireto fiara valo ireto, hany ka tsy izy rehetra no afaka miara-miasa fa vitsy monja. Mifandraika amin’ny tsy fandoavan’ny olona sasany hetra izany ka lasa mahatonga ny fahataran’ny asa tokony hisosa ara-dalàna. Ankoatra izany, ny fikambanana “Terre Environnement et Developpement” (TED) ihany koa dia nisintaka tsy niara-miasa amin’ny kaominina intsony. Efa taona vitsivitsy lasa izany.
Ny toe-tsaina tia fahadiovana
Matetika dia indrahindràna amin’ny haino aman-jery ny resaka tontolo iainana sy ny fahasalamàna. Ny mponina ihany anefa no tompon’antoka voalohany amin’izany. Fotoanan’ny orana tokoa izao, betsaka ny aretina mitranga, indrindra fa ny gripa sy ny aretin-kibo. Tokony tandrovana mandrakariva ny fahavitrihan’ny vatana sy ny saina. Fa anisan’ny mampisokatra ny saina ny fifohana rivotra madio sy tsara, ary izany no antony hialàna sasatra rehefa feno sy reraky ny asa ny saina, ka mitady rivotra madio sy malefaka.
Tsy mamaly ilay fanentanana hanaja ny tontolo manodidina anefa ny mponina sasany. Eny Vatofotsy, amin’ny toeram-piantsonana sy eo Ampiaviana matetika no ahatarafana io toe-tsaina mirefarefa amin’ny tany io, raha ny eto Antsirabe manokana ; ny fanaovana maloto eny am-body hazo tsy lazaina intsony, amin’ny toerana maro eto an-tanàna. Misy ny manary fatin’alika amin’ireny dabam-pako ireny. Midofaka tsy tantin’ny orina ny fofony raha vao miakatra kelikely ny hain’andro. Ny fiara mandalo zary manidy fitaratra mihitsy noho izay fofona tsy zaka izay. Mitovy amin’ny mamosavy tena ny mponina eto Antsirabe raha tsy amboarina haingana ny toe-tsaina mba ho liana fahadiovana. Izay vao azo antenaina ny fandrosoana raha tanteraka sy voahaja io filamatra hoe “tanàna madio, tanàna mandroso” io. Sady ny loto no fahavalon’ny olona salama afaka mitondra fandrosoana. Mila manova toe-tsaina ny mponina ao Antsirabe raha tiana ny handroso sy hampandroso an’i Madagasikara.